Amanqaku kaMat Nettleton kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UMat Nettleton
UMat Nettleton yimpembelelo ephezulu, inkokeli yeqela elinamandla lokuthengisa kunye nomqeqeshi onomdla weziphumo kunye nerekhodi eqinisekisiweyo. Ndineminyaka engaphezu kwama-25 yamava ndiqala utshintsho ekufezekiseni iinjongo kunye nokwenza izixhobo ezifanelekileyo zokuphucula ingeniso, ulawulo lweendleko kunye nokukhula kwenzuzo.
Nokuba iiProses zibuyela kwinkampu yoQeqesho
NgoLwesine, uJuni 24, 2010 Lwesine, Okthobha 4, 2012 UMat Nettleton
Kutheni le nto iiColts zisiya kwiKampu yoQeqesho? Ngaba abayazi indlela yokudlala ibhola? Ngomhla wamashumi amathathu kuJulayi walo nyaka iiColts zizakuya kwiKampu yoQeqesho, oku kuyakubonisa ukuqala kweeveki ezine zokuziqhelanisa okunzulu okuyilelwe ukunyanzela abadlali ukuba bagxile kwinto ekufuneka beyenzile ukuphucula amandla abo okudlala ibhola. Kodwa kubonakala ngathi kukuchitha ixesha kum, ngapha koko, uninzi
Kuthekani ukuba ukuthengisa kwakho kuyasebenza?
NgoMvulo, Februwari 1, 2010 NgoLwesihlanu, Agasti 2, 2013 UMat Nettleton
Njengomqeqeshi wentengiso ndisebenza neenkampani kuluhlu olubanzi lwamashishini. Kwaye phantse yonke inkampani endisebenza nayo isebenzisa inkcitho engaphezulu kulo nyaka kunokugqibela kuthengiso olugxile kwi-intanethi, kubandakanya nemidiya yoluntu. Ngelishwa uninzi lwezi nkampani, intengiso yazo kwi-intanethi iqala ukusebenza kwaye bafumana iifowuni kunye ne-imeyile evela kubathengi abakhuthazayo abaye babafumana babalandela kwi-intanethi. Kodwa bayaqaphela umkhwa ophazamisayo, ukuthengisa
Nkqu neFlanzi yeNtlanzi efileyo
NgeCawa, ngo-Novemba 22, 2009 Lwesine, Okthobha 4, 2012 UMat Nettleton
Ukukhula kwam ndikhuliswe ngumntu owayenethemba kwaye engenathemba, uMama wam wayengoyena mntu wonwabileyo. Uye waqinisekisa ukuba ndikhuliswe ndinengqondo eninzi, ndinqwenela into elungileyo kuye wonke umntu kwaye ndenza konke okusemandleni am ukunceda abantu baphume. Njengoko bendiqala ukufunda nokukhula ndambuza malunga nokuba kutheni enceda abanye abantu angabathandiyo kwaye impendulo yakhe yayiyiyo
Ii-squirrels eziNtloko eziNtloko kunye neKamikazes
NgoLwesithathu, Novemba 18, 2009 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 UMat Nettleton
Ngale njikalanga ndenze udliwanondlebe noMat Nettleton. UMat ngumqeqeshi oqeqeshiweyo wentengiso kunye nomqeqeshi wam othengisayo apha e-Indianapolis. Umsebenzi awenzileyo ukuza kuthi ga ngoku utshintshe isimo sam (esibi) kwintengiso kwaye eneneni uzukile izakhono zam zokuthengisa. Ukuthengisa kunzima kakhulu kunangaphambili… ngelixesha abantu babiza iqela lakho lokuthengisa, banolwazi kakhulu. Ndiyakholelwa ukuba kubangelwe lutshintsho olukhulu kwinkqubo apho